Howlgallo ciidan oo ka socda koofurta Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Howlgallo ciidan oo ka socda koofurta Mudug
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug, ayaa saaka dhaqdhaqaaq ciidan ka wada degaannada dhaca koofurta Gobolka Mudug, sida ay sheegayaan ilo kala duwan.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay in Ciidamada Daraaawiishta maamulkaas iyo kuwa Xoogga Dalka oo is kaashanaya ay koofurta Gobolka Mudug, ka wadaan howlgallo ciidan oo lagu xoreynayo degannada ay gacanta ku hayaan Kooxda Al-Shabaab.
War ka soo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug, ayaa lagu yiri, “Hawlgal ballaaran iyo weerar jihooyin kala duwan leh ayay saakay ciidamada amniga Galmudug iyo ciidamada qaranku ku ekeeyeen goobo badan oo kooxda argagixisada Shabaab gacantooda ku jiray”.
Warka waxaa sido kale lagu sheegay in ciidamada huwanta ah ay ku sii siqayaan magaalada Camaara ayagoo burburiyey difaacyo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen duuleedak Camaara iyo Bacaadweyn, kadib markii ay xilli danbe oo xalay ah isaga baxeen.
“Hawlgalka ciidamada qaranka iyo kuwa Galmudug ay ku baacsanayaan kooxda khawaariijta ayaa noqonaya mid sii socon doona illaa laga xoraynayo deegaanada gacantood ku haray”. Ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda uu ugu sareeyo Axmed Macallin Fiqi.
Degaannada Bacaadweyn, Sabeenno-gawrac iyo Qeycad, oo lixdii bishaan ay tageen ciidamada XDS iyo Daraawiishta Galmudug, ayay dib ula wareegeen Kooxda Al-Shabaab isla maalintaas, kadib markii dagaallo kharaar ayaa ka dhaceen inta u dhaxeysa degaannada Wisil iyo Bacaadweyn.
Dhanka kale, dadka shacabka ah uu ku sugan tuuleeyinka howlgallo ka socdaan ayaa la soo sheegayaa in ay u qaxeen dhanka howdka iyaga oo ka cabsi qaba isku dhacyada ciidamada.